आफ्नै फ्यान खोजेर आउँदो साल बिहे गर्छु -सुनिता दुलाल | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
जेठ ३१ गते, २०७२ - २०:०४
सुनीता दुलाल नेपाली लोक गायन क्षेत्रको चर्चित नाम हो । तिज गीत र आफ्नै म्युजिक भिडियोमा अभिनयमार्फत चर्चाको सगरमाथा चुमेकी दुलाल यसै वर्षभित्र विवाह बन्धनमा बाँधिदै छिन् । ‘मलाई विवाहको प्रस्ताव गर्ने प्रायः त मेरो फ्यानहरु नै हुनुहुन्छ ।’ खबरडबलीका लागि सुदीप विश्वकर्मा र सरिता कार्कीले गरेको कुराकानीमा उनले भनेकी छिन्, ‘मेरो विवाह फ्यानसँगै हुन्छ ।’
० तपाईं जन्मेको जलबीरेमा सानो छँदा घाँस दाउरा गरेको याद छ ?
हाम्रो ठूलो परिवार छ र निकै ठूलो खेतीपाती । परिवारले मात्र नसक्ने भएका कारण हामीले खेतमा काम गर्ने मान्छे राखेका थियौं । घरकी कान्छी छोरी म, दाइको छोरा–छोरीलाई पढाउने जिम्मेवारी लिएर बजार (जलबिरे) को घरमा बस्दथें । सुरुमा म निजी विद्यालयमा पढ्थें तर एक्कासी सबै नीजि विद्यालय बन्द भएपछि सरकारीमा भर्ना भएको थिएँ । सरकारीमा भर्ना हुँदा तीन कक्षामा पढिरहेकी म एकैपटक आठमा जम्प भएँ । जसका कारण मलाई पढाईमा निकै प्रेसर थियो । बिहान कोचिङ र सधैं दाइको छोराछोरीलाई खाना बनाएर खुवाउनुपर्दा मैले सबै समय त्यसैमा व्यतित हुने गर्दथ्यो । घरका अन्य सदस्य खेतमा जानु हुन्थ्यो । म पनि बिदाको दिन जान्थेँ । मलाई खेतको सबै काम गर्न आउँछ । घाँस काट्न, भारी बोकेरै नहिँडेपनि त्यसको अनुभव छ । मेरो ड्याडी पशु चिकित्सकका साथै कृषक पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले अर्गानिक खेतीतर्फ बढी जोड दिएका थियौं । तरकारीमा पानी हाल्ने खेतमा जान्थें । मकै गाड्ने, भाँच्ने, असारमा धान रोप्ने काम मैले सबै गरेको छु ।
० खेतीपाती गर्दै गर्दा के सोच्नुहुन्थ्यो ?
सानोमा म शिक्षिका बन्छु भन्ने ठूलो धोको थियो । मेरो दाइ घमेश दुलाल म सानो हुँदा नै गायकको रुपमा स्थापित भइसक्नुभएको थियो । म विद्यालय जीवनमा राम्रो नाच्ने गाउने गर्थें । कक्षा ८ मा पढ्दा दिनदिनै अरुणा लामाको गीत गाउनुपर्दथ्यो । त्यतिबेला निकै मन लगाएर गीत गाउँथे । सबैले स्वर राम्रो भएको टिका टिप्पणी गर्दथे । सबैले यसो भन्दा निकै खुसी लाग्थ्यो । कुनै बेला गायिका बन्छु भन्ने सोच त थियो तर पहिलो एल्बमबाटै यति चर्चा पाउँछु भनेर सोचेकै थिइनँ । सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौं आएपछि मैले एक विद्यालयमा पढाएँ । एसएलसी दिएपछि आफ्नै स्कूलमा पनि चार वर्ष पढाएँ । विभिन्न एफएमहरुमा काम गरें । यही चरणहरु पार गर्दै अहिले गायिका बनेकी छु । यदि म गायिका नबनेको भए पक्कै पनि शिक्षिका हुन्थें ।
० तपार्ईंले गायिका अरुणा लामाको प्रसंग ल्याउनुभयो । उनले भनेकी थिइन् ‘गायक बन्ने कला गलामा होइन मुटुमा सिउरेको हुन्छ ।’ सुनिताको मुटुमा त्यो कला कहिलेदेखि सिउरियो ?
म नर्सरीदेखि नै नाच्ने गाउने गर्थें । हाम्रो स्कुलमा हरेकहप्ता शुक्रबार कार्यक्रम हुन्थ्यो जसमा म सधैं म पहिलो हुन्थें । त्यति बेलैदेखि गाउने नाच्नेतिर अलि बढि झुकाव हुन थाल्यो । अरुणा लामाले जे भन्नु भएको थियो त्यो सहि थियो । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । आफूलाई मन लागेको कुरामा घरपरिवारको सहयोग हुन्छ नै भन्ने छैन तर भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ । परिवारको सहयोग नभएपनि यदि आफूलाई त्यसमा निकै रुची छर र निरन्तर प्रयासमा लाग्यो भने पक्कै पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
पद्म कन्यामा मैले संगीत विधामा नै ग्र्याजुयसन गरेकी हुँ । पछि प्रकाश गुरुङ सरसँग मैले साधना कला केन्द्रमा पनि सिकेँ । त्यो बेला विमाकुमारी दुरा, सर्मिला गुरुङ दिदिहरुको राम्रो थियो । त्यतिबेला यो क्षेत्रमा उहाँहरुको प्रतिस्पर्धामा आउनु कम जोखिम थिएन । स्थापित भइन्छ की भइन्न भन्ने कुराको पिरलो थियो । गायिका बन्न मेहनत गर्छु भन्ने त थियो तर असफल भएमा के त भन्ने थियो । बाटो बदल्नुको विकल्प थिएन ।
० गायिका सुनीता दुलालको पहिचान निधारमा ठूलो टिका, आँखामा गाजल रातो लिपस्टिक र सारी हो । तपाईंमा यो गुण आमाबाट सरेको हो ?
मेरी ममीले पनि एकदम ठूलो टिका लगाउनुहुन्छ । म विद्यालय पढ्दा, ममीको सारी लगाएर, ऐना अगाडि बस्थें । मेरो बाल मस्तिष्कमा शिक्षिकाले सारी लगाउनुपर्छ भन्ने कैद थियो । पछि म शिक्षिका बन्दा कस्तो देखिन्छु भन्ने उत्सुकता मेटाउन साडी लगाएर आफैंलाई ऐनामा हेर्ने गर्दथें । पछि गायिका बनेपछि मेरो गीतको प्याटर्न तिज भइदियो । धेरैले मलाई ‘तीज क्विन’ भनेर ट्याग पनि लगाइदिनुभयो । सारी, चुरापोते, टिका, तिज गीत र सुनीता दुलाल भनेर जोडियो । नलागाऔं भन्दा पनि लगाउनु पर्ने, विवाह नै नभएपनि भिडियोको लागि सिन्दुर लगाउनु पर्ने पेसा भयो । तिजमा सारी लगाउँदा आकर्षक देखिन्छ, रातो टिकाले नारीलाई थप सुन्दरता पनि प्रदान गरेको हुन्छ । यसमा नै पहिचान बनाउँछु भन्ने थिएन । मलाई सबैले अरु पहिरनमा भन्दा साडीमा नै मनपराउनु हुन्छ । मलाई पनि स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुती दिँदा साडीमा नै सहज महसुस गर्छु ।
० ममीको मन पर्ने पहिरन के हो ?
साडी र कुर्ता हो । अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ । अहिले ममी पाइन्ट र टिसर्ट पनि लगाउनुहुन्छ । तर नेपालमा हुँदा साडी र कुर्तामात्र लगाउनु हुन्थ्यो ।
० सारीमा कति खर्च हुन्छ ?
प्रायः जसो एकैचोटी किन्ने हुँदा यति नै हुन्छ भन्ने छैन । तिजको बेलामा एकैपटक एक लाखभन्दा बढि खर्च हुन्छ । कहिले दुई महिनाको टुरमा जानुपर्ने हुन्छ । मैले लगाएका धेरै साडीहरु बिक्रि हुने गर्दछन् । अहिले मसँग दुई सयको हाराहारीमा साडीहरु छन् । सयवटा जति बिक्री भइसकेका छन् । साधारणदेखि अलि महँगोसम्मका छन् । दर्शकहरुले स्टेजमा लगाएको देखेर मन पराउनुहुन्छ र खरिद गर्नु हुन्छ । एकपटक क्यानडामा एकैपटक ३५ वटा साडी बिक्री भयो ।
० सारी व्यापार गर्नु भयो भने त धेरै बिक्रि हुन्थ्यो होला है ?
मैले आइसप पनि खोलेकी छु मेरो वेबसाइट सुनीता दुलाल डटकममा मैले सिडीहरु पनि बेच्न राखेकी छु । मेरो फ्यान पेजमा पनि धेरै अर्डर आउँछन् । कहाँ बनाउनु भयो ? कतिमा बनाउनुभयो ? जस्ता प्रश्नहरु धेरै आउँछन् । मलाई निकै खुसी लाग्छ । कतिलाई जवाफ पनि फर्काउने गर्छु तर कसैलाई भ्याउँदिन । धेरै त अनलाइनबाटै बिक्री भइरहेका छन् । दुई वर्षपछि म अनलाइन बुटिक खाल्ने विचारमा छु । नेपालमा पनि एउटा खोल्छु ।
० तपाईं चाहि सारीमै देखिनुहुन्छ । लोकगायिकाहरुबीच अंगप्रदर्शन गर्ने होडबाजी छ नि ?
स्टेजमा दोहोरी गाउँदा साडीमा जति राम्रो अरुमा देखिँदैन । आफ्नो सुविधाको कुरा पनि होला, मलाई साडीमै सजिलो लाग्छ । कलाकारको पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । विदेशमा गएका बेला लामो साडी लगाएर हिँड्नु अलि सान्दर्भिक नहोला । ठाउँ हेरेर व्यवहार गर्नुपर्छ । म पनि विभिन्न पहिरनहरु लगाउँछु तर त्यस्ता पहिरनमा भएका तस्बिरहरु फेसबुकमा अपलोड गर्दिनँ । कतिपय गायिकाले स्टेजमा अंग प्रदर्शन गरेका कुराहरु आइरहेका छन्, यो निकै दुःखदायी कुरा हो । सायद उहाँले आफूलाई अलि बढि नै परिवर्तन गर्न खोज्नु भएर यस्तो भएको हुनसक्छ । उनीहरुको भावनालाई दर्शकले नबुझेर यस्तो भएको हो कि, मलाई यसको विषयमा थाहा भएन । मलाई साडीमा सहज लाग्छ । मलेसिया जाँदा, एनसेलको टिसर्ट र प्यान्ट लगाएर दोहेरी गाउनु परेको थियो । लोकगीत वा दोहोरी भनेको नेपाली संस्कृतिको आधार हो । नेपालीपन र संस्कृति झल्किने भएका कारण लोकगीतमा अरु पहिरनभन्दा साडीमा जाँदा उचित हुन्छ ।
० आफूलाई सारीमा राम्री छु जस्तो लाग्दैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । एउटी बालिकालाई गुन्यु चोली लगाइदिनस् त उनलाई अर्कै सुन्दर देखिन्छ । साडीले मलाई मात्र होइन सबैलाई राम्रो देखाउँछ । जतासुकै नेपाली कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ साडी लगाएको सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ।
० गीतहरु धेरै गाउनु भएको छ आफैंले गाएका गीतहरु छान्नु पर्दा ?
मैले १०० वटा एल्बम गरिसकेको छु । मलाई देश विदेशमा चिनाउन सफल भएको गीत ‘अब त मैले नी झुम्का लगाउँछु’ हो । दाहोरी चाँहि ‘मेरै दिलमा फुल्यौ निरमाया’ हो । ‘फूलबुट्टे साडी’ पनि एकदमै रुचाइदिनु भयो । प्रायः मेरो सबै गीतहरु रुचाइदिनुभएको छ । मलाई सबै गीत मनपर्छ । विशेषगरी मलाई मनपर्ने भनेको ‘झुम्का लगाउँछु’ नै हो ।
० रातमा सपनाहरु देख्नुहुन्छ होला, हुनेवाला जीवनसाथीको सपना देख्नु भएको छ ?
सपनाहरु देखिन्छ । कहिले काँही विवाह भएको सपनाहरु देख्नु । जीवन साथी नभएपनि ।
० कतै मिडियासँग भन्नु भएको थियो, ‘मेरो जीवन साथी पक्का भयो’ उनलाई सपनामा देख्नुहुन्न ?
मलाई यो प्रश्नले धेरै टाउको दुखाइसकेको छ । म जहाँ गएपनि आउने प्रश्न यही हुन्छ । म विवाह गर्ने मनस्थितिमै छु । यो वर्ष होइन अर्को वर्ष मेरो विवाह हुन्छ । एकदमै फाइनल त मैले गरेको छैन । परिवारमा पनि धेरै कुरा आएको भएर मैले पनि बुझ्दै छु । फाइनल भएपछि छिटै खबर गर्छु ।
० एरेन्ज वा लभ के हुन्छ ?
दुबै हुन्छ । घर परिवारबाट पनि धेरै कुरा आइरहेको छ । यो भित्र खोजी सक्छु (यो चैत्र भित्र) । त्यसपछि अर्को वर्ष मंसिर भित्र मेरो विवाह हुन्छ ।
० विवाहको प्रस्ताव कति आए ?
प्रस्ताव अनगिन्ती आए । जति आए पनि रोज्ने एउटै हो ।
० तपाईंले कस्तो मान्छे रोज्नु भयो ?
मलाई पढाइ पूरा गर्न नपाएकोमा पश्चात्ताप छ, त्यसैले ऊ अलिकति पढेलेखेको होस्, थोरै फरवार्ड होस्, अनुहार त्यत्ति धेरै राम्रो चाहिँदैन । बानीव्यहोरा एकदमै राम्रो, मेरो कामलाई इज्जत गर्ने र मलाई सपोर्ट गर्ने हास् ।
० त्यो स्ट्याण्डर्ड मिट गर्ने तपाईंको फ्यान नै होला नि ?
प्रायः त मेरा फ्यानहरु नै हुनुहुन्छ । विवाह फ्यानसँगै हुन्छ ।
जेठ ३१ गते, २०७२ - २०:०४ मा प्रकाशित